Yaa Dawlad u eg Puntland iyo Maamulka Hargeeysa? | allsanaag
Yaa Dawlad u eg Puntland iyo Maamulka Hargeeysa?
Inaad dawladnimo sheegato ma ahan wax sahlan. Intii dagaalka Tukaraq uu dhacay, maamulka Puntland ma jiro qof maxbuus ah, dhaawac ah, ama dhintay iyo gadiid dagaal oo ay soo bandhigeen. Soomaalidu waxeey tiraahdaa, “Dhal magaal inaad noqotaa weey fogtahay, dhar magaalose inaad xirataa weey dhawdahay”. Hadaba, su’aasha isweeydiinta leh waxeey tahay, Puntland iyo maamulka Hargeeysa keebaa u eg dawlad.
← Wareegtada Yaxye Cali Ibrahim La taliyaha Madaxda SNM →